नेपालको छनोट हुने सम्भावना कस्तो छ? | Hamro Khelkud
नेपालको छनोट हुने सम्भावना कस्तो छ?
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – एएफसी यू२३ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले समूह ‘डि’को पहिलो खेलमा कमजोर सुरुवात गर्यो। शनिबारको खेलमा नेपाली टोलीले घरेलु टोलीसँग ५-०को फराकीलो पराजय भोगेको थियो। यस हारले नेपाली टोलीको अन्तिम चरणमा छनोट हुने सम्भावनालाई पनि लगभग अन्त्य गराएको छ।
बंगलादेश विरुद्धको सुरुवाती एघार
समूहकै अर्को खेलमा उज्वेकिस्तानले लेबनानलाई ३-१ले पराजित गरेपछि नेपाल सनूहको पुछारमा रहने निश्चित भएको हो। नेपाललाई पराजित गरेको युएई अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने उज्वेकिस्तान दोश्रो स्थानमा रहेको छ। लेबनान पनि नेपालझैं अंकविहिन छ र गोल अन्तरका आधारमा नेपालभन्दा माथि तेश्रो स्थानमा छ।
प्रतियोगिताको नियमावली अनुसार समूह चरणका शीर्ष टोली र ५ उत्कृष्ट उपविजेता टोली अन्तिम चरणका लागि छनोट हुन्छन्। यदि अन्तिम चरणको आयोजक चिन स्वत: छनोट भएमा छैटौं उत्कृष्ट टोली पनि अगाडी बढ्नेछ। प्रतियोगितामा सहभागी ४० देशलाई १० समूहमा विभाजन गरिएको छ।
नेपालले अब छनोटको सम्भावना कायम राख्न बाँकी दुई खेलमा ठुलो अन्तरको जित दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। ५-०को हारसँगै नेपालको अंक र गोलअन्तर दुवैमा ठुलो सुधार आवश्यक रहेको छ। नेपाललो समूह चरणको अन्य खेलमा सोमबार उज्वेकिस्तान र बुधबार लेबनानको सामना गर्दैछ।